မဆုံနိုင်သေးတဲ့ ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလူကို ပြန်ကြိုးစားဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ် - Arsenal Myanmar News
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အသံထွက်ခဲ့ပြီး သုံးစရာ ငွေမရှိခဲ့လို့ လက်လျှော့ထားခဲ့ရတဲ့ လိုင်လီနောက်ခံလူ ဘရာဇီးလ်သား ဂါဘရီယယ်လ် မာဂါလက်စ်အတွက် ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အာဆင်နယ်တို့ ထပ်မံကြိုးစားဖို့ ရှိနေပြီး နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ အီဒူးရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို တွေ့မြင်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အဲဗာတန်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကလည်း အလိုရှိနေတဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် နောက်ခံလူဟာ ဘရာဇီးလ်ယူ-၂၃ လက်ရွေးစင်အသင်းကို ရွေးချယ်ခံထားရပေမယ့် နုတ်ထွက်ထားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဥရောပရဲ့ အရည်အသွေးရှိ လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ် လက်ရွေးစင်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က မှတ်ယူထားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီက ပေါင် ၂၂.၅ သန်း တောင်းဆိုထားခဲ့တဲ့ လိုင်လီရဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် အာဆင်နယ်တို့ မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ဘဲ ဆော်ပေါ်လိုရဲ့ ပါဘလို မာရီကိုသာ အငှား+အပြီးသတ်နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ရပေမယ့် ရာသီသစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုမှာတော့ နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာအနေနဲ့ သူ့ကို ထပ်ပြီး ကြိုးစားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအနေနဲ့တော့ အာဆင်နယ်နဲ့ လိုင်လီရဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းရှိထားမှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နီကိုလတ်စ် ပေပေရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ ဂါဘရီယယ်လ်ကိုလည်း အေးအေးဆေးဆေးမှ အရစ်ကျ ပေးချေလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ဘရာဇီးလ်သားဗဟိုနောက်ခံလူတွေကို ခေါ်ယူဖူးခြင်းမရှိတဲ့ မန်ယူအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာမလိုပေမယ့် ဝါရင့် နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ကိုင်တွယ်နေတဲ့အပြင် အီရန်သူဌေး မိုရှီရီရဲ့ ငွေကြေးတွေကို သုံးစွဲလာဖို့ ရှိနေတဲ့ အဲဗာတန်အတွက်တော့ သတိထားရမှာဖြစ်ပြီး အီဒူးရဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ ချိတ်ဆက်စည်းရုံးနိုင်မှာလား စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: ပွီးခဲ့တဲ့ ဆောငျးရာသီမှာ အသံထှကျခဲ့ပွီး သုံးစရာ ငှမေရှိခဲ့လို့ လကျလြှော့ထားခဲ့ရတဲ့ လိုငျလီနောကျခံလူ ဘရာဇီးလျသား ဂါဘရီယယျလျ မာဂါလကျဈအတှကျ ဒီနှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ အာဆငျနယျတို့ ထပျမံကွိုးစားဖို့ ရှိနပွေီး နညျးစနဈဒါရိုကျတာ အီဒူးရဲ့ ခြိတျဆကျမှုတှကေို တှမွေ့ငျရဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အဲဗာတနျနဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးတှကေလညျး အလိုရှိနတေဲ့ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ နောကျခံလူဟာ ဘရာဇီးလျယူ-၂၃ လကျရှေးစငျအသငျးကို ရှေးခယျြခံထားရပမေယျ့ နုတျထှကျထားခဲ့သူဖွဈပွီး ဥရောပရဲ့ အရညျအသှေးရှိ လူငယျတဈဦးအဖွဈ လကျရှေးစငျဘောလုံး အဖှဲ့ခြုပျက မှတျယူထားသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ပွီးခဲ့တဲ့ ဆောငျးရာသီက ပေါငျ ၂၂.၅ သနျး တောငျးဆိုထားခဲ့တဲ့ လိုငျလီရဲ့ ဈေးနှုနျးကွောငျ့ အာဆငျနယျတို့ မချေါယူနိုငျခဲ့ဘဲ ဆျောပျေါလိုရဲ့ ပါဘလို မာရီကိုသာ အငှား+အပွီးသတျနဲ့ ချေါယူခဲ့ရပမေယျ့ ရာသီသဈအတှကျ ပွငျဆငျမှုမှာတော့ နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာအနနေဲ့ သူ့ကို ထပျပွီး ကွိုးစားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ပွိုငျဘကျအသငျးတှအေနနေဲ့တော့ အာဆငျနယျနဲ့ လိုငျလီရဲ့ ဆကျဆံရေးကောငျးရှိထားမှုကို ကြျောဖွတျနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ နီကိုလတျဈ ပပေရေဲ့ အပွောငျးအရှအေ့တိုငျးဆိုရငျတော့ ဂါဘရီယယျလျကိုလညျး အေးအေးဆေးဆေးမှ အရဈကြ ပေးခလြေို့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ဘရာဇီးလျသားဗဟိုနောကျခံလူတှကေို ချေါယူဖူးခွငျးမရှိတဲ့ မနျယူအတှကျတော့ စိုးရိမျစရာမလိုပမေယျ့ ဝါရငျ့ နညျးပွ အနျဆယျလော့တီ ကိုငျတှယျနတေဲ့အပွငျ အီရနျသူဌေး မိုရှီရီရဲ့ ငှကွေေးတှကေို သုံးစှဲလာဖို့ ရှိနတေဲ့ အဲဗာတနျအတှကျတော့ သတိထားရမှာဖွဈပွီး အီဒူးရဲ့ အစှမျးအစနဲ့ ခြိတျဆကျစညျးရုံးနိုငျမှာလား စောငျ့ကွညျ့ရမယျလို့ သတငျးတှကေ ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-25T09:06:38+00:00	July 25th, 2020|News|Comments Off on မဆုံနိုင်သေးတဲ့ ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလူကို ပြန်ကြိုးစားဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်